प्रधानमन्त्री निवासमा प्रचण्डले भने– ठूलो भूकम्प आयो ! - Enepal Serofero
प्रधानमन्त्री निवासमा प्रचण्डले भने– ठूलो भूकम्प आयो !
काठमाडौ , ३० फागुन– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा ठूलो राजनीतिक भूकम्पको कम्पन गएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार आयोजना गरेको चियापानमा प्रचण्डले बाम गठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणाले अर्को पक्षको स्वर्गमा ठूलो भूकम्प गएको बताए ।
‘विद्रोहको नेृतृत्व गर्दा पनि मैले भूकम्पको महसुस गर्ने गरेको थिएँ’, प्रचण्डले भने, ‘तर, बाम गठबन्धन र पार्टी एकता हुँदै सरकार गठन, राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकारले पूर्णता पाउने संघारमा पुग्दा अहिले त्योभन्दा ठूलो भूकम्पको महसुस गरेको छु । एकथरिको स्वर्गमा भूकम्प गएको छ ।’ बाम एकताबाट आत्तिएको पक्षले आफूहरुविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको भन्दै उनले प्रतिवाद गर्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । ‘हामी वातावरण स्थिर बनाउन चाहन्छौं, हामी स्थायित्व दिन चाहन्छौं’, उनले भने, ‘ यही बेला अर्को पक्ष यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न चाहन्छ । बाम गठबन्धन र एकताप्रति दुस्प्रचार बढ्दै गएको छ ।’
अहिलेको नेतृत्वले राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुर्दढ गर्न र जनताको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन चाहेको दाबी उनले गरे । आफूहरु हिमाल, पहाड र तराईलाई एकताबद्ध गर्न उद्धत रहेको भन्दै उनले मधेसवादी दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएसँगै सम्पूर्ण मुलुक एकताबद्ध भएको सन्देश गएको उल्लेख गरे । विरोधीका भ्रम चिर्न सांसदहरुलाई अपिल गर्दै उनले जनताको सेवा गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्न भने ।
‘राष्ट्र र जनताको सेवाबाहेक हाम्रो अर्को उद्देश्य छैन भन्ने स्थापित गरौं’, उनले भने, ‘नेपाल योभन्दा बढी अराजकता र स्थिरता थेक्न सक्ने ठाउँमा छैन । हामीले हिमाल, पहाड तराई जोड्ने र एकता गर्ने कुरा कसैको विरुद्धमा छैन । यो राष्ट्रको आवश्यकता हो ।’ यद्यपि उनले उत्तेजित हुन नहुनेमा जोड दिए । प्रचण्डले मुलुकमा कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र कनेक्टिीभिटीमार्फत सञ्चारसँग जोडिएर मुलुकको विकास गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
Prevविमान दुर्घटनामा परेर भाग्यले बाँचेकी पाईलट अनिता भन्छिन “फेरी जहाज उडाउँछु”-हेर्नुहोस पुरा समाचार
Nextआफ्नो बिमान दुर्घटनाको सम्बन्धमा यूएस बंगलाले विमानस्थलको टावरमा बस्ने कर्मचारीलाई लगायो यति ठुलो आरोप, आखिर के हो सत्यतथ्य ?